Madilo - Wikipedia
Ny voamadilo na kily na madiro (Tamarindus indica) dia hazo zavamaniry (fianakaviana Fabaceae) mitondra voany azo hanina izay zanatany Afrika tropikaly. Ny karazana Tamarindus dia, midika izany fa ity karazana ity ihany no ao anatiny.
Ny kily na madiro dia karazan-kazo avy any amin'ny faritra trôpikaly maina ao Afrika Atsinanana no aniriany. Efa hatry ny elabe no nampbolena azy tany Azia Atsimo ka avy any no niparitahany amin'ny faritra trôpikaly rehetra. Nisy vitsivitsy nampidirina tany Amerika Afovoany tamin'ny taonjato faha-16 ka miparitaka ao Meksika sy ao Hôndorasy ary Goatemala io hazo io amin'izao fotoana izao. Eto Madagasikara, indrindra ao amin'ny faritry ny Sakalava, dia heverina ho hazo masina ny kily na madiro, izay atao hoe "mpanjakan'ny hazo".
Hazo mety mahatratra 10 m hatramin'ny 20 m ny kily. Fohifohy ny vatany. Miadam-paniry izy sady velona maharitra. Maharitra ny raviny izay miisa hatramin'ny 24 isaky ny tahon-dravina. Manopy mavo ny voniny izay maniry midina amin'ny volana Mey ka mamoaka voa makirana amin'ny volana Ôktôbra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Madilo&oldid=1042313"
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2021 amin'ny 01:23 ity pejy ity.